Fiarovana Android: arovy ny findainao na ny takelaka misy ireto torohevitra ireto | Androidsis (Pejy 3)
Ny FBI dia mitsikera an'i Apple sy Google noho ny fanaovany encrypt tsara ny findainy
Ny FBI dia maniry ny fahazoana miditra amin'ireo telefaona manana ny encryption Apple sy Google vaovao ao amin'ny iOS 8 sy Android L
Ny mpizaha tranonkala Android dia manana lesoka fiarovana izay mamela ny mari-pahaizana hangalarina
Ny kinova alohan'ny Android 4.4 KitKat dia manome lesoka amin'ny fiarovana amin'ny tranokala tsy misy fampiasa
Tetika tsotra 5 hanatsarana ny filaminan'ny Android anao
Zava-dehibe ny fiarovana Android, ary tena ilaina ny fikarakarana azy io. Asehonay aminao anio ny tetika kely hitadidy.
Atsaharo ny Motorola ny mpiara-mitory amin'ny ho avy mety tsara ho an'ny android
Ny FCC dia namoaka fitaovana vaovao Motorola, Motorola Skip, fitaovana vaovao nohavaozina izay hahafahantsika mamoha sy mahita ny findaintsika.
Fomba fiasa 5 ilaina amin'ny fiarovana Android
Google dia manolotra fampiasa fiarovana Android manan-danja amin'ny Android Device Manager na fanamarinana XNUMX-dingana
Ahoana ny fomba hamafana ny atin'ny telefaona Android alohan'ny hamarotana azy?
Alohan'ny hamafana ny atin'ny telefaona Android dia zavatra maro no tsy maintsy raisina mba hanomanana azy amidy
Mihamaro ny rafitra mamoha lamba. Androany isika dia miresaka momba ny vaovao farany eny an-tsena, ny Knock Code an'i LG ary raha tena azo antoka izy io.
Ny telefaona sinoa Android dia mety hanana spyware napetraka ao amin'ny orinasa
Ny telefaona sinoa Android dia manana kinova sandoka amin'ny Google Play Store sy rindrambaiko voan'ny Spyware araka ny data G.
Ahoana ny fomba fanaovana kopia nomaniny ho azy ny sarinao
Ahoana ny fomba ahazoana kopia nomaniny ho solon'izay ny sarinao miaraka amin'ny rindranasan'i Mega maimaimpoana ary hanana toerana fitahirizana 50 Gb malalaka.
Ny masoandro miposaka dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana ho an'ny fitaovana finday na amin'ny Internet
Fanairana Android!: Trojan Fantasy manafika fitaovana an'arivony maro any Espana
Misy fandrahonana vaovao mahatratra ny Android ary mamindra mpampiasa maherin'ny 67.000 any Espana. Ny anaranao Trojan Fantasy
Torohevitra tsotra 5 hampitomboana ny fiarovana amin'ny WhatsApp
Maro amin'ireo lesoka amin'ny fiarovana hitantsika ao amin'ny WhatsApp no ​​vokatry ny fitantanana tsy diso ny fampiharana izay azo sorohina amin'ny toro-hevitra tsotra.
Android-Trojan.Koler.A no ransomware voalohany ho an'ny Android?
Toa avo ny fampandrenesana fiarovana amin'ny Android, satria fandrahonana vaovao antsoina hoe Android-Trojan.Koler.A no mety ho ransomware voalohany ho an'ny Android.
Tokony hametraka fampiharana fiarovana feno toa an'i Lookout ve aho?
Mitombo ny ahiahy momba ny fandriam-pahalemana amin'ny Android, ary androany ao amin'ny Androidsis dia dinihinay ny mety hisian'ny fampiharana iray manontolo toa an'i Lookout eo akaiky eo.
Hafatra maimaimpoana sy azo antoka tanteraka avy amin'ny terminal Android anao amin'ny Confide
Ny Confide ho an'ny Android dia fomba iray hafa handefasana hafatra maimaimpoana avy ao amin'ny terminal anay na dia miantoka ny fiainana manokana sy filaminana aza izahay.
Iza no mangalatra Wifi-ko?
Fampianarana tsotra amin'ny alàlan'ny fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android hahafantarana hoe iza no mangalatra Wifi-ko?.
Ny fampiharana Cerberus security and anti-steal dia misy maimaim-poana mandritra ny iray andro
Ny fampiharana Cerberus security and anti-steal dia misy maimaim-poana anio
Ankehitriny manana alalana hamaky ny mailaka anay manokana ny Gmail
Ankehitriny manana alalana hamaky ny mailaka anay manokana ny Gmail hampiasa azy ireo ho tombontsoany manokana ary handefa dokam-barotra sy tolo-kevitra mety.
Google dia manome fiarovana fanampiny ho an'ny Android amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso tsy tapaka ireo rindranasa izay mandeha amin'ny rafitra
Ny antivirus tsara indrindra ho an'ny fahatsapana mahazatra Android
Te hanana antivirus tsara indrindra ho an'ny Android ve ianao?, Aza hadinoina ireo fitsipika tsotra momba ny fahiratan-tsaina lazaiko anao eto ambany ireo.
Universal TV Remote: ohatra amin'ny dokam-barotra manaitaitra amin'ny fampiharana Android
Universal TV Remote dia ohatra iray amin'ny fanaovana doka manafika amin'ny rindranasa Android sy izay ezahin'i Google hajanona amin'ny fomba rehetra.
97% amin'ireo malware no mankafy Android, maninona?
Na dia miala tsiny milaza izany aza aho, ny 97% amin'ireo malware dia aleonao Android, fa fantatrao ve ny antony?
Ahoana ny fomba hitaterana atiny tsy mendrika ao amin'ny Play Store
Eto ianao manana tutorial tsotra mba hahafantaranao ny fomba hitaterana atiny tsy mendrika ao amin'ny Play Store.
Zavatra 3 tokony hotadidina ao an-tsaina alohan'ny hametrahana fampiharana am-pilaminana amin'ny Android
Ny fametrahana fampiharana izay manome alalana antsika no làlan-kizorana lehibe indrindra amin'ny filaminan'ny Android. Manome torohevitra 3 anao izahay anio mba hialana amin'izany.
Fanairana Android !! malware vaovao izay misy fiatraikany amin'ny Android sy Windows
Mahazo ny vaovao momba ny malware vaovao voamarika amin'ny Android izay mety hisy fiatraikany amin'ny solosaintsika manokana miaraka amin'ireo rafitra miasa Windows ao aminy.
Android Alert !!: Android malware dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, na dia ivelan'ny Play Store aza
Lahatsoratra manaitra maro an'ny fampandrenesana Android style !! Nahita ny tenako tamin'ny jeneraly aho tamin'ny famolavolana ny olan'ny rindranasa voan'ny Android.
Play Store sy ny fividianana ao amin'ny App, Tandremo ny minitra 30!
Alohan'ny hamelana ny terminal antsika ho an'ny ankizy kely dia tsy maintsy manaraka ny lalàna momba ny fiarovana isika, ilay voalohany miaro ny Play Store amin'ny teny miafina, na dia ...
CM Security, anti-virus feno ho an'ny Android
CM Security dia anti-virus ho an'ny Android izay manome antsika fiarovana tena izy sy feno ho an'ireo terminal Android.
Night Vision Camera mbola misy ao amin'ny Play Store, mitandrema tsara!
Toa tsy mampino fa aorian'ny 24 ora sy ny fanehoan-kevitra izay ananan'ny Night Vision Camera dia mbola azo alaina ao amin'ny Play Store izy io.
Ilay antivirus maimaim-poana 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Betsaka ny antivirus izay manatanteraka tsara ny asan'ny fanomezana fiarovana amin'ny telefaona, saingy misy dimy maimaim-poana izay no tsara indrindra.
Fampiharana heverina ho maloto iray no vao notaterina izay mbola ao amin'ny Play Store ary ny anarany dia Night Vision Camera.
Fanairana Android!: Trojan TOR voalohany ho an'ny Android hita
Araka ny notaterin'ny laboratoara Kaspersky, nisy Trojan Android vaovao voamarika izay mety hahatonga ny tsy fitonona anarana momba ny tamba-jotra TOR.
Fanairana Android!, Mitandrema amin'ny fisintomana Flappy Bird avy amin'ny Play Store na fivarotana hafa
Fampandrenesana Android vaovao hita tao amin'ny kopia Flappy Bird tsy tany am-boalohany izay maro amin'izy ireo no hamindra antsika amin'ny malware Android.
Misimisy kokoa momba ny fahazoan-dàlana amin'ny Android, fanekena vaovao amin'ny fanavaozana
Ny olana bebe kokoa amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny Android dia mety ho hita amin'ny fanavaozana ny fampiharana izay misy fangatahana alalana vaovao miditra ao amintsika.
TimePIN dia manome fiarovana azo antoka amin'ny findainao
TimePIN hanatsarana ny filaminan'ny findainao miaraka amina lamina isan-karazany izay hanasarotra ny famohana ny telefaoninao.
Ny valin'ny Facebook momba ny alalana vaovao angatahin'ilay kinova vaovao ho an'ny Android
Eto ianao dia manana fanazavana ofisialy avy amin'ny Facebook momba ny alalana takiana amin'ny fampiharana ofisialy ho an'ny Android
Misimisy kokoa momba ny alalana tsy ilaina amin'ny Android Apps
Ohatra iray hafa azo ampiharina momba ny fahazoan-dàlana tsy ilaina izay takian'ny fampiharana sasany amin'ny Android.
Samsung Galaxy S4: Mitandrema amin'ny kopian'ny telefaona piraty!
Voalaza fa nosamborin'ny manampahefana Alemanina ny 250 Fakes an'ny Samsung Galaxy S4 teo amin'ny sisintanin'izy ireo izay nikasa ny hiditra ny faritany Alemanina.
Samsung Galaxy Note 3: tandremo ny fanavaozana ofisialy ny Android Kit Kat
Mahazo hevitra avy amin'ny mpampiasa samihafa izay mety niaina olana tamin'ny Kit Android ofisialy Samsung Galaxy 3 izay mihodina amin'ny Kit Kat ofisialin'i Samsung.
Ataovy azo antoka ny Android anao amin'ny ZDlock
ZDlock dia rindranasa maimaim-poana misy mivantana ao amin'ny Play Store ary izany dia hanampy anay hitazona ny tsiambaratelo sy fiarovana ny Android.
Telegram no loharano misokatra "WhatsApp" mifantoka amin'ny fiarovana sy tsiambaratelo
Raha mitady serivisy fandefasana hafatra an-tserasera multiplatform maimaim-poana izay mifantoka amin'ny fiarovana sy loharano misokatra ianao dia Telegram ity.
Fampiharana tsy ho hita amin'ny WhatsApp, tena ilaina?
Betsaka ny rindranasa hanafenana fa mifandray amin'ny Internet amin'ny WhatsApp ianao, saingy tena ilaina ve izany?
Samsung Galaxy Note 3, vahaolana amin'ny fanakanana ireo tranga tsy ofisialy Samsung
Izahay dia efa manana vahaolana mahomby hahafahana mampiasa tranga tsy fahita S-View amin'ny Samsung Galaxy Note 3 anao.
Nijanona ve ianao hieritreritra ny lisitry ny fahazoan-dàlana omenay an'ireo rindranasa toa ny WhatsApp? Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia dinihinay amin'ny antsipiriany izany.
Fanairana Android: hosoka vaovao mampiasa anarana WhatsApp
Mitandrema mba tsy hamaly ny SMS voaray milaza fa tsy mamaly azy ireo amin'ny alàlan'ny WhatsApp ianao raha manontany raha nanampy tamin'ny andro hafa.
Ahoana ny fomba hijerena raha voajirika ny kaontinao Snapchat?
Eto izahay manome anao fomba roa hijerena raha toa ka miharihary amin'ireo fanafihana nihatra tamina herinandro vitsivitsy lasa izay ny kaontinao Snapchat.
Lahatsary video hampianarana anao miaro ny terminal Android anao amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny teny miafin'ny Play Store hiarovana ny fividiananao.
Ny fampiharana piraty dia olana lehibe amin'ny Android sy iOS
Tsy misy isalasalana fa ny piraty dia loza mitatao amin'ny Android sy iOS ary iray amin'ireo teboka mainty lehibe amin'ny rafi-pitantanana finday.
Android mahafinaritra mahafinaritra !!
Na dia ho ahy aza ny rafi-piasan'ny Android no tsara indrindra eto an-tany, tsy midika izany fa mbola maro ny lafiny tokony hatsarany, ao anatin'izany ny fiarovana
Android Alert !!, malware vaovao voamarika izay hanao antso Premium
Tandremo ity malware vaovao vao hita ity izay mety hanao antso tsy mifanaraka amin'ny laharana premium miaraka amin'ny fandaniana fanampiny.
Fanairana Android: Tandremo ny lalao BalloonPop 2 dia rindrambaiko mpitsikilo Whattsapp
Ity Alert ity dia tonga aty aminay ho fampiharana mampidi-doza izay afaka mitsikilo ny resaky ny laharana mifandraika amin'i Whattsapp.
LG G2, ny fomba famerenana ny folder EFS (ROOT)
Fampianarana iray isaky ny dingana hiarovana ny folder EFS an'ny terminal LG G2 anao amin'ny endriny rehetra.
Fanitsakitsahana fiarovana matotra amin'ny telefaona Nexus
Vao nampandrenesina ny fanairana rehefa nisy lesoka fiarovana lehibe hita tao amin'ny finday avoakan'i Google.
Fampandrenesana fiarovana!, Tandremo ny fanaovana doka ratsy
Mitandrema tsara amin'ny sora-baventy fampiharana izay manolotra dokam-barotra ratsy hanoratanay ny serivisy premium.
Vahaolana momba ny lesoka naseho tao amin'ny Nexus 4 taorian'ny fanavaozana ny Android 4.4 Kit Kat
Toa ny mpampiasa Nexus 4 sasany dia miaina olana samihafa aorian'ny fanavaozana ny Android 4.4 Kit Kat.
Fampiharana Android mahatalanjona: fakan-tsary mpitsikilo
Spy Camera dia iray amin'ireo fampiharana tsy mampino ho an'ny Android izay ahafahantsika maka sary sy horonan-tsary nefa tsy tsikaritry ny olona manodidina antsika
Malwarebytes, ny Windows malaza suite manohitra ny malware dia tonga amin'ny Android
Malwarebytes dia suite Windows malaza iray izay tonga tamin'ny Android ihany mba hiarovana ireo terminal antsika amin'ny malware.
Apple tsy misy an'i Steve Jobs, voaheloka tsy hahomby?
Tsy misy isalasalana fa ny sarin'i Steve Jobs dia tsy ampy amin'ny laharan'i Apple, hany ka mety hanoratra ny faran'ny vanim-potoana be voninahitra ity.
Fanairana! Tandremo sao hamaka ny Samsung Galaxy Note 3!
Chainfire tenany ihany dia nanamafy fa amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao ny mametraka ny counter flashing an'ny Samsung Galaxy Note 3 ho aotra.
Jailbreak sy Root, izany no fanontaniana napetraka tamin'i Susana de la Fuente tamin'ny resadresaka natao tao amin'ny vavahadin'ny programa.
Fanairana: fanafihana an-tserasera hita amin'ny mpampiasa WhatsApp
Androany tolakandro dia namaky andiana fanafihana vaovao tamin'ireo mpampiasa WhatsApp ilay vaovao, izay hahazo fampandrenesana manimba amin'ny alàlan'ny mailaka
Amin'ny SpeedKey ho an'ny Android dia afaka manafoana ny tenimiafin'ny Wifi ao anatin'ny 20 segondra fotsiny sy avy amin'ny Android -ntsika manokana isika.
Ahoana ny fomba handaminana ny Android Device Manager handrindrana sy hamafana ny findainao
Ny Android Device Manager dia fitaovana tsotra sy mahery izay hiaro ny terminal anao amin'ny tanan'ny hafa. Atorinay anao ny fomba handaminana azy.
BBM ho an'ny Android dia mbola tsy misy ao amin'ny Play Store, tandremo izay alainao !!
Amin'ny 17:30 hariva, ora Espaniôla, ny BBM ho an'ny Android dia mbola tsy misy ao amin'ny Play Store na amin'ny tranokala BlackBerry ofisialy.
Fampisehoana vaovao ao amin'ny Android Device Manager
Google dia mampiditra endri-javatra roa vaovao amin'ny Device Manager izay ahafahanao manova ny teny miafinao sy manidy azy nefa tsy mila mamafa.
Ny Chrome beta 30 ho an'ny Android dia miteraka famerenana miverimberina amin'ny fitaovana marobe
Chrome beta 30 ho an'ny Android dia manana olana goavana miteraka reboots matetika amin'ny fitaovana Android isan-karazany.
Ubuntu Lockscreen, ilay fampiharana fanokafana Ubuntu Touch tena izy ho an'ny Android-nao
Ubuntu Lockscreen dia rindranasa maimaimpoana tanteraka izay hahatonga antsika haka tahaka ny Lockscreen Ubuntu Touch amin'ny Android.
Samsung dia nanambara fifanarahana tamin'ny Lookout hampidirana antivirus ao amin'ireo tobiny
Samsung sy Lookout dia nahavita fifanarahana hampihatra ny antivirus any amin'ny faran'ny tobin'ny orinasa Koreana ary hiaro azy ireo bebe kokoa.
Ny hevitro momba ny ecosystem Android sy ny manodidina azy
Android dia rafitra miasa lehibe tokoa ary noho izany dia manana olana ara-piarovana lehibe, fa ny zava-bita izay tokony hoderaina ihany koa i Google.
Android Tricks (III): Ny tsinay ny terminal-ntsika
Misaotra an'ity lahatsoratra ity dia ho afaka hahafantatra ireo angona manan-danja indrindra amin'ny fitaovanay izahay, amin'ny fampiasana ireo fika asehonay anao eto ambany.
Google dia manome patanty ny fiovan'ny rafitra fiarovana Android: lamina
Ny lamina dia fomba fiarovana tena mahomby (terminal hidin-trano). Google dia manome patanty fiovana miaraka amin'ny fidirana haingana amin'ny rindranasa.
Advanced Mobile Care: The Swiss Army Knife ho an'ny Android
Advanced Mobile Care dia rindranasa fitaovana marobe izay ahafahana mitazona ny fitaovantsika Android amin'ny toe-javatra tonga lafatra.
Torohevitra Android (III): Fomba fiarovana mahomby
Zava-dehibe ny fiarovana Android ary noho izany dia manana fomba samihafa hiarovana ny terminal: PIN, Password, Model ary Face Unlock
Symantec dia nanamarina fa ny fampiharana Facebook ofisialy dia mandefa ny nomeraon-telefaonantsika talohan'ny nidirantsika tao anaty ny angon-drakitra
Ao amin'ny Play Store dia misy programa antivirus sandoka marobe izay mampiditra malware ao amin'ny rafitra fiasa, ary izany dia miteraka fandisoan-kevitra diso amin'ny rafitra.
Android dia rafitra fandefasana be dia be misy endri-javatra maro ary izany no antony hanomezana anao torohevitra vitsivitsy hanatsarana ny filaminana ny Androidsis.
Fampianarana tsotra hamaha ny Samsung Galaxy S4 tanteraka maimaim-poana sy maharitra
Lesoka fiarovana mampidi-doza ao amin'ny Sony Xperia Z
Nisy lesoka fiarovana iray vao hita izay mamela ny fidirana amin'ny fitaovana Sony Xperia Z mihidy tsy misy fahasarotana loatra.
Lesoka fiarovana vaovao amin'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny Android 4.1.2
Nisy lesoka fiarovana vaovao hita tao amin'ny fitaovana Samsung Galaxy mandeha amin'ny Android 4.1.2. Ity bug ity dia mamela ny fidirana amin'ny birao lehibe
TheftSpy - fampiharana iray hamerenana ny finday nangalarina
Fampiharana mahaliana novolavolain'ny XDA Developers mitondra ny anarana TheftSpy afaka manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny finday halatra.
Korea Selatan dia hangataka ny hampiditra rindranasa fiarovana amin'ny finday
Amin'ny fampidirana rindrambaiko manokana, Korea Selatan dia manolo-kevitra ireo mpanamboatra finday mba hisorohana ny fanaovana herisetra amin'ny cyber.
PlaceRaider, malware iray namboarin'ny Pentagon
PlaceRaider dia rindrambaiko noforonin'ny Pentagon izay maka sary miaraka amin'ny fakantsarinao, mamerina ny tontolo iainana amin'ny lafiny telo.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny backup EFS folder
Tutorial video tsotra hamerenana amin'ny laoniny ny folder EFS amin'ny Android.
Ahoana ny fomba hamerenanao ny folder EFS
Fampianarana tsotra hahazoana kopia backup amin'ny folder EFS
Fepetra takiana handefasana romana masaka amin'ny terminal Samsung
Torohevitra momba ny fomba hirosoana rehefa mametraka rom masaka amin'ny terminal Samsung
Hitan'ny mpikaroka ny onjan'ny malware eo amin'ny Android
Mampitandrina ny security security Trend Micro fa hihamafy hatrany ny fizarana malware amin'ny Android amin'ny faran'ny taona.
Google dia manolo-kevitra ny tsy hampiasa Google Wallet amin'ny fitaovana miorim-paka
Hitan'ny orinasa fa lesoka iray amin'ny fiarovana ny fandoavam-bola amin'ny Google Wallet amin'ny fitaovana miorim-paka rehetra.
Fanairana, Virus vaovao (Trojan) amin'ny Android!
Virosy Trojan vaovao hita amin'ny Android, antsoina hoe HongTouTou. Notaterin'ny orinasa fiarovana LookOut izay mivarotra antivirus ho an'ny rafitra finday. Manaova fikarohana sy tsindry amin'ny valiny, azonao atao ny manodina ny SMS.
Android 2.0.1 dia manana olana ara-piarovana
Ny olana ara-piarovana dia hita ao amin'ny kinova Android 2.0.1 izay saika ny terminal rehetra an'ny Motorola Droid napetraka ao Etazonia
MOTOROLA DROID SY ANDROID 2.0 MANANA OLANA
Betsaka ny mpampiasa manana olana amin'ny terminal Motorola Droid ary araka ny filazan'izy ireo izany dia noho ny Android 2.0